Izindaba - Kungani bonke opharetha bemishini yokuhlunga bethi umshini wokuhlunga ulwelwesi ungcono
Umshini wokuhlunga ulwelwesi usebenzisa isimiso somoya ocindezelweyo, ongowenqubo yokuhlunga ukungasebenzi kahle kwamanzi okuphezulu. Ngemuva kokuxova kokuqala kwepuleti lokuhlunga, ulwelwesi lwesigubhu luzofuthwa futhi (noma uketshezi), ukuze kuzuzwe ukuhlunga okugcwele, kunciphise kakhulu okuqukethwe komswakama wekhekhe lokuhlunga. Futhi eminyakeni yamuva nje, lo mshini usetshenziswa kabanzi kukaphethiloli, amakhemikhali, ukudla, izinto ze-elekthronikhi, izinto zobumba, izindwangu neminye imisebenzi. Ekupheleni kwenqubo yokondla, ikhekhe lokuhlunga licindezelwa ngcindezi ephezulu ngogqinsi lwesigubhu ukunciphisa kakhulu okuqukethwe komswakama wekhekhe lokuhlunga. Ukwelashwa okuzenzakalelayo ngokuphelele kunciphisa nabasebenzi abaningi, futhi kwezinye izinqubo, inqubo yokumisa ingagwenywa.
Ipuleti lokuhlunga lomshini wokuhlunga we-diaphragm likabili emaceleni nge-diaphragm cavity. Uma kuqhathaniswa nensimbi yokuhlunga yefreyimu yesihlungi cindezela, ipuleti yesihlungi se-diaphragm inezindawo ezimbili zokuhlunga zangaphambili nangemuva: i-diaphragm. Lapho okokucindezela (njengomoya ocindezelweyo noma uketshezi) kungeniswa ngemuva kwesivalo, i-diaphragm izokhuphuka iye ngasekamelweni lokuhlunga, okusho ukuthi, ngemuva kokuphothula inqubo yokuhlunga, ikhekhe lokuhlunga uphinde uxovelwe ngaphansi kwengcindezi ephezulu. Okuqukethwe komswakama kwekhekhe lokuhlunga kungaba ngaphansi ngo-10-40% kunalokho kwepuleti elijwayelekile lokuhlunga. Uma kuqhathaniswa nendabuko ibhokisi lemifanekiso cindezela, okuqukethwe okuqinile kwesihlungi ikhekhe kungakhuphuka kube ngaphezu kwezikhathi ezi-2 ngaphansi kwezimo ezithile, futhi izindleko zokuhamba ezibonakalayo zinciphile kakhulu # Plate nohlaka lokuhlunga cindezela #
Ngokuya ngezinto ezisetshenzisiwe ezahlukahlukene, kufanele kukhethwe izinto ezahlukahlukene zokusetshenziswa nezinhlobo zokuqinisekisa ukuhlungwa kwekhwalithi ephezulu. Izinto zokwenziwa ngo-diaphragm yilezi: i-Yamato rubber, i-nitrile butadiene rubber, i-Teflon, njll. Ngenxa yomphumela omuhle wokuhlunga, izinga eliphakeme, ukonga abasebenzi kanye nezindleko zokwelashwa kwesibili zomshini wokuhlunga wesithiyo, inesikhundla esihle sokuhola emisebenzini emikhulu. Isibonelo: upende, ukumboza, izitsha zobumba, ukuvikelwa kwemvelo, ukwelashwa kwamanzi angcolile, ukwakhiwa, udaka, imboni yamakhemikhali, njll. Uma kusetshenziselwa i-viscosity ephakeme kancane yoketshezi, udinga ukufanisa i-reducer noma i-frequency Governor, ipompo yegiya iyafana.
Ngaphezu kwalokho, umshini wokuhlunga we-diaphragm unezinzuzo zevolumu encane, ukuphatha kalula, akukho sisekelo, ukufakwa okulula nokonga. Umshini wokuhlunga we-diaphragm ungasetshenziselwa ukuhambisa uketshezi ngezakhi zamakhemikhali ezingazinzile. Ngenxa yamandla aphansi okushefa kwepompo ye-pneumatic, ayinamthelela omncane emzimbeni. Okufana nokuthi: izinto ezibukekayo, i-flocculant, njll. Ezindaweni ezinendawo yokwakha engeyinhle kangako, njengezindawo zokwakha, amanzi angcolile ezimboni kanye nezimayini, ipayipi kulula ukuvaleka ngenxa yokungcola okuningi nezinto ezingcolile kule ndle. Umshini wokuhlunga wesithiyo ungadlula ezinhlayiyaneni futhi izinga lokugeleza liyakwazi ukuguquguquka. Lapho ipayipi livinjiwe, lizoma ngamandla lize livulwe. Ngaphandle kwalokho, umthwalo wepompo kagesi uzobe uphezulu kakhulu, futhi imoto izoshisa futhi ibe sengozini.